Fisamborana Sy Fandrahonana Ireo Mpitantana Ny Telegram Sy Mpanao Gazety Mialoha Ny Fifidianana No Hitan’ny Iraniana · Global Voices teny Malagasy
Fisamborana Sy Fandrahonana Ireo Mpitantana Ny Telegram Sy Mpanao Gazety Mialoha Ny Fifidianana No Hitan'ny Iraniana
Voadika ny 17 Avrily 2017 7:43 GMT
Mialoha ny fifidianana ho filoha hatao ny volana May, samborin”ireo mpiambina revolisionera ireo liam-pivoarana (reformista) . Sary nampiasana ny CC 4.0 avy ato.
Navoaka tao amin'ny tranonkalan'ny Article 19 ny dika iray amin'ity lahatsoratra ity. Naverina navoaka ho anisan'ny fifanarahana fizarana votoaty ity dika iray ity.
Roa volana monja talohan'ny fifidianana filoham-pirenena izay hatao 19 May 2017, miatrika ny famoretana ny olom-pirenena mampiasa ny sehatra aterineto ny Iraniana.
Tamin'ny 14 Martsa, nosamborin'ny Mpiambina Revolisionera ao Iràna ireo 12 mpitantana ny fantson'ny fampiasa fandefasana hafatra Telegram , izy rehetra izay naneho ny fanohanany ny rantsana politika liam-pivoarana (reformista) sady filoha tony fihetsika, Hassan Rouhani.
Nahazo laza ny Telegram nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka 2016, ho toy ny sehatra izay nanampy tombony manan-danja ho an'ny reformista sy ny mpikambana tony fihetsika ao amin'ny Parlemanta. Hetsika malaza, toy ilay lahatsary maharitra efatra minitra an'ny filoha reformista Mohammad Khatami niparitaka ary nandrisihana ireo Iraniana mba hifidy kandidà avy amin'ny reformista sy tony fihetsika, ampahany amin'ny fiaraha-mitantana ny “lisitry ny fanantenana” no niparitaka be nanerana ny fantson'ny Telegram (iharan'ny fandraràna tsy hiakatra haino aman-jery ankehitriny ilay mpanao politika malaza.) Tany amboalohany ireo Mpiambina Revolisionera, elatra matanjaka ao amin'ny tafika Iraniana, tompon'andraikitra eo anatrehan'ilay Mpitarika Faratampony, dia nisambotra mpampiasa noho ny famoahana votoaty ratsy na vetaveta tao amin'ny Telegram. Nefa toa ity no famoretana voalohany izay mifantoka mivantana amin'ny firehana ara-politika.
Ahitana ny reformista, na ny fantson'ny filazam-baovao mpomba ny Filoha Hassan Rouhani Eslahtalaban News, Eslahaat News, Majmeye Eslahtalaban ary Haamiyan Dolat, sy hafa koa ireo fantson'ny Telegram niharan'ny famoretana.
Milaza ny loharano aty anaty aterineto fa ireo fantsona ireo dia, na novonoina tao amin'ny Telegram, sy/na tsy namoaka na inona na inona intsony hatramin'ny fisamborana. Na izany aza, hatreto dia olona roa no voatondro ho mpandrindra nosamborina: Saeed Naghdy sy Ali Ahmadian, izy roa ireo izay samy mifandray amin'ny haino aman-jery reformista sy ny fitantanana ireo fantsona reformista. Ahmadian no inoana ho nanangana ny fantsona filazam-baovao Eslahaat News.
Azo tsapain-tànana ety ivelan'ny tontolon'ny nomerika ihany koa ny famoretana ny fahalalahana maneho hevitra izay mitondra ho any amin'ny fifidianana ny filoham-pirenena amin'ny May 2017. Nosamborina ihany koa ireo mpanao gazety Reformista toa an'i Ehsan Mazandarani sy i Hengameh Shahidi noho ny tatitra tsy miankina sy mitsikera ataon'izy ireo.
Ehsan Mazandarani, izay vao avy nivoaka ny fonja dia mbola nosamborin'ny Vondrona mpitsikilo avy amin'ny Mpiambina Revolisionera tao an-tranony indray tamin'ny 12 Martsa. Nilaza ny mpampanoa lalàna ao Teheran fa nosamborina indray izy mba hamita ny saziny sisa tavela tamin'ny fanamelohana azy taloha. Na izany aza, ny vadiny sy ny mpisolovava azy dia namoaka antontan-taratasy izay manaporofo fa efa nahavita ny saziny roa taona izy fony izy navotsotra tamin'ny 11 Febroary 2017.
Niteny tamin'ny fianakaviany i Mazandarani fa miditra aminà fitokonana tsy misakafo sy tsys misotro rano izy. Nitatitra tamin'ny haino aman-jery ireo havany fa noroahana tao amin'ny Gazety Farikhtegan tamin'ny zoma nanaraka ny fisamborana azy i Malihe Hosseini vadiny.
Tsara homarihina fa ireo fisehoan-javatra rehetra ireo dia nitranga nandritra ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra Nowruz, fony tsy nivory ny governemanta, ka mahatonga azy io ho sarotra kokoa ny hahazoana antoka fa ho voahaja ny lalàna.
Ireny fisamborana sy fanakatonana kaonty ireny dia efa nametra ny fetra izay ahafahan'ny Iraniana miditra sy mizara vaovao sy hevitra mahakasika ny filatsahana ho fidiana, tsy matahotra izay mety ho fiantraikany. Raha mbola mitohy ny famoretana, mbola hametra bebe kokoa ny fandraisan'ny vahoaka anjara amin'ny fotoanan'ny politika izany.